University of Illinois at Urbana-Champaign - Wezemfundo e USA
University of Illinois at Urbana-Champaign Yokuxhumana
isifinyezo : UIUC
Wasekelwa : 1867
abafundi (ngu.) : 44000
Ungakhohlwa xoxa University of Illinois at Urbana-Champaign
Bhalisa at University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Illinois at Urbana-Champaign kuyinto somphakathi ukuthi yasungulwa ngo 1867.
Ukufundisa Imali e University of Illinois at Urbana-Champaign kukhona $31,000 (Aprox.).
The University of Illinois itholakala emizini ezimbili Urbana futhi Champaign e empumalanga-maphakathi ne Illinois, amahora ambalwa kuphela ukusuka Chicago, Indianapolis futhi St. Louis. Ukulwa sikole Illini iqhaza ezingaphezu kuka 20 NCAA Division I enyuvesi ezemidlalo kanye bayingxenye Big Ten Conference. Inyuvesi inama uhlelo lesiGreki enkulu kunazo zonke emhlabeni, futhi cishe ingxenye yesine ka umzimba umfundi ehilelekile. Akunzima ukuthola okuthile ukukwenza on campus njengoba kungabantu abangaphezulu kuka 1,000 izinhlangano student, kuhlanganise professional, amakilabhu ezombusazwe kanye lapho bengasiza. Zonke freshmen ayadingeka ukuze siphile on campus.
University of Illinois at Urbana-Champaign zihlanganisa 17 ezikoleni nasemakolishi. Its Graduate School of Library and Information Science, College of Engineering and noMnyango Psychology kuphela zingezinye zezibhedlela ezihamba kuleli lizwe. College Isikole sika of Business, College of Education and College of Law nazo zibalwa kakhulu. Isikole libhekwa njengendlela eyunivesithi ne eliphezulu kakhulu umsebenzi ucwaningo by Carnegie Foundation for the Advancement of Yokufundisa. The University of Illinois kwaba isikole kwabokuqala abanikeza ukufinyelela yokukhubazeka wonke amasevisi enyuvesi, lwezifundo izikhungo. alumni Okuphawulekayo zihlanganisa owazuza uMklomelo KaPulitzer ifilimu umhlaziyi uRoger Ebert kanye co-umsunguli YouTube, Steve Chen.
College of Agricultural, Consumer nezeMvelo Sciences
College of Applied Sciences Health
College of Fine kanye Applied Arts
College of Medicine Veterinary
Between emadolobheni amaningana, Urbana kukhethwe e 1867 njengoba site for isikole esisha. Kusukela ekuqaleni, Isifiso Gregory ukusungula isikhungo ugxilile liberal ubuciko isiko kwaba ephikisana izakhamuzi State eziningi nabashaya imithetho ababefuna inyuvesi ukunikela amakilasi ngenxa nje nxazonke “imfundo zezimboni”. Inyuvesi wavula amaklasi ngoMashi 2, 1868, futhi ukube amalungu amabili ubuhlakani kanye 77 abafundi. ” Gregory ngokuyinhloko udumo liqine University ngendlela ongayo namuhla. ithuna Gregory sika-campus Urbana, phakathi Altgeld Hall kanye Henry Administration Building. itshe eliyinhloko yakhe (Ukulingisa Epitaph of Uhlelo Lokufaka Lwe-British Christopher Wren) ufundeka kanje, “Uma nifuna etsheni lakhe eliyisikhumbuzo, bheka ngawe.”
The Library, okuyinto wavula ne esikoleni 1868, waqala nge 1,039 imiqulu. Kamuva, PresidentEdmund J. James, enkulumweni iBhodi Labaphathiswa e 1912, ohlongozwayo ukudala umtapo ucwaningo. Kuyinto manje ungomunye amaqoqo academic ngobukhulu zomphakathi emhlabeni. Ngo 1870, the Mumford House wakhiwa njengoba epulazini model epulazini yokulinga yesikolo. I Mumford House uhlala isakhiwo omdala campus. I original University Hall (1871) laliwukuphela kwesakhiwo 4th wakha; Wama lapho Illini Union umi namuhla.
Ngesikhathi u-Edmund J. James (1904-1920), James udumo ayizikwele okwakha isisekelo esikhulu Chinese umfundi labantu international on campus. James ezisungulwe ubuhlobo China ngaphansi kwesandla sikaNgqongqoshe Chinese United States Wu Ting-Fang Ngaphezu, ngesikhathi iHhovisi likaMengameli James sika, class umbango futhi Yokuwina football amaqembu Bob Zuppke kwaba nomthelela ekubeni campus morale.
Ngo-June 11, 1929, Alma Mater esifanekisweni lesikhumbuzo. Alma Mater yasungulwa ngeminikelo by the Alumni Fund kanye amakilasi of 1923-1929. Esifanekisweni ekuqaleni ikhanya ehholo kwaze kwaba yilapho yathuthelwa zamanje on August 22, 1962 Like Amayunivesithi amaningi, ukucindezeleka kwezomnotho behlisa ukwakhiwa nokwanda on campus kodwa ngalesi sikhathi University Hall ubudala waqala ugoqe e 1938. Inyuvesi sathatha indawo ehholo original enyuvesi ne Gregory Hall kanye Illini Union. Ngemva kweMpi Yezwe II, inyuvesi akhule ngokushesha. Ekubhalweni laphindeka kabili kumi academic improved. Lesi sikhathi futhi abashe ukukhula enkulu Graduate College futhi anda nokusekela yase 60s kwezesayensi nakwezobuchwepheshe research.During-1950 no 'inyuvesi wazibonela nenhlokomo evamile uma esewonke eziningi American. Phakathi kwalaba kwakukhona ngosuku lwempi amanzi zamashumi amahlanu nezinduna sixties.
Ngo 1998, amahholo Gateway Plaza lanikezelwa. I Plaza izici original sandstone portal ye-Nguqulo Main University Hall. Isimo Illinois ihlinzekwa kalukhuni izingxenye ezimbili kwezintathu isabelomali nyuvesi lapho uhulumeni ezikhona okunemali ebekelwe 90% locwaningo. Eminyakeni yakamuva, yesibonelelo sikahulumeni liye lehla lisuka 4.5% intela ukwabiwa yembuso 1980 ukuze 2.28% e 2011, a ecishe ibe 50% nokwehla. Ngenxa yalokho, isabelomali senyuvesi iye ngokuqinile sigudluke sokuncika emalini yesibonelelo sikahulumeni cishe 84% kwesabelomali manje ozayo evela kweminye imithombo. Ngo-March 12, 2015 iBhodi Labaphathiswa ivume kudalwa esikoleni sezokwelapha, kokuba ekolishi Waqale wadala at Urbana-Champaign in phezu 60 iminyaka.
I original gama 1867 kwaba “Illinois Industrial University.” Ngo 1885, the Illinois Industrial University ngokusemthethweni washintsha igama layo University of Illinois, sibonakalisa yezolimo yayo, mechanical, kanye nobuciko liberal lwezifundo. Lokhu kwaqhubeka igama elisemthethweni iminyaka ecishe ibe 100 iminyaka, kuze kube lashintshwa laba University of Illinois at Urbana-Champaign in 1982 (besebenzisa reverse of the isiqu livamise ukusetjenziselwa endaweni, “Champaign-Urbana”), ayethi uzokwenza ngazo ukusungula ungubani ehlukile ngoba campus ngaphakathi University of Illinois uhlelo. Nokho, lesikhungo uyaqhubeka ukwaziwa njengoba “University of Illinois”, noma nje “Illinois” kokubili abezindaba kanye eziningi zamakhasi ewebhu UIUC sika. Kusukela ngo 2008, inyuvesi waqala rebranding ngokwaso njengoba “Illinois” kunokuba UIUC, ekushintsheni website kanye imeyili amakheli kusuka uiuc.edu kuya Illinois.edu.
Uyafuna xoxa University of Illinois at Urbana-Champaign ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Illinois at Urbana-Champaign kumephu
Izithombe: University of Illinois at Urbana-Champaign Facebook ezisemthethweni
University of Illinois at Urbana-Champaign Izibuyekezo
Joyina ukuze kuxoxwe University of Illinois at Urbana-Champaign.